Atụmatụ na ngwa nke okporo-erughị ịghasa ebu
Dị ka a ọhụrụ ụdị nke iga igwe abụrụ na-adịbeghị anya, na aro-erughị ịghasa ebu adopts imewe nke okporo-erughị, na pụrụ iche na Ọdịdị. Ọ na tumadi ekewet nke moto, reducer, n'ibu akara, mgbanwe aro-erughị ịghasa, ị ekara uzo, na-elekọtakwa bushing, wdg Ndị ọzọ na-akwado ngwa na-agụnye na-akwado ụkwụ, cover efere, ọgwụgwụ cover na Flange.
Uru nke okporo-erughị ịghasa ebu dị irè ngwa
Tụnyere a belt ebu
(1) Ebe ọ bụ na U uzo, na-akwado ụkwụ, cover efere na n'akụkụ ndị ọzọ na-mere nke igwe anaghị agba nchara, ha mara mma ile anya, kọmpat na Ọdịdị na obere na-arụ ebe.
(2) A bịa ná Ọdịdị dịtụ mfe ole na ole akụkụ. The ị ekara uzo adopts sectional Flange njikọ, nke bụ adaba iji dochie na ịrụzi n'ime bushing. Ya mere, dum igwe-agba n'enweghị na reliably, na mmezi bụ adaba. N'ihi na esemokwu nke aro-free spirals na ị ekara uzo echebe lining ihe ndị dị elu na-eyi ndị na-eguzogide ihe, na na ala gburugburu na-agba, obere eyi, ogologo ọrụ ndụ na ala mmezi-akwụ ụgwọ.
(3) Ọ bụrụ na ndị dehydrated sludge mmadụ na mberede adaghị udia mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri, ọ ga-eme ka ọ bụla chụsasịrị ma ọ bụ leakage na agaghị emetọ gburugburu ebe obibi. Ke adianade do, ebe ọ bụ na elu nke ị ekara trough na-onwem na cover efere, na-erute usoro ihu ọma bụ nke airtight njem, n'ihi ya, ọ nwere ike n'ụzọ dị irè belata ime ụlọ peculiar isi.
(4) Na nkịtị ọrụ usoro, mmezi na ukpụhọde ndị nwere ihu ọma na-enweghị isi, nke nwere ike n'ụzọ dị irè belata ọrụ ike nke rụọ.
Nka na ụzụ atụmatụ nke okporo-erughị ịghasa ebu
Jiri ya tụnyere ihe ọdịnala ịghasa ebu na aro, na ịghasa ebu enweghị aro nwere ndị na-esonụ ama uru:
1.Shaft-erughị ịghasa ebu asọfe-eguzogide bụ ike, n'ihi na ọ dịghị Central axis, na-ebu belt, viscous ihe onwunwe, mfe asọfe ihe nwere pụrụ iche uru, dị ka eji na nsị ọgwụgwọ osisi erute ezi ihuenyo, ya net Ogwe site 50 mm decontamination igwe okporo slag na nyo pịa apịtị achicha ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ, ma ọ bụ mkpofu saịtị nhazi nke n'efu, iji gbochie ihe mgbochi mere site na mberede.
2.Shaft-erughị ịghasa ebu nwere ezigbo ebe obibi arụmọrụ. The aro-erughị ịghasa ebu adopts na gburugburu n'elu na bụ n'ụzọ zuru ezu mechiri emechi na mfe ọcha, nke nwere ike ekwe nkwa na gburugburu ebe obibi idebe ihe ọcha na ihe n'aka ndị mmetọ na leakage.
3. Large torque anya na ala oriri ike nke okporo-erughị ịghasa ebu. Dị ka ịghasa nwere dịghị aro, ihe na-adịghị mfe egbochi, na-agbapụta n'ahụ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na-adịghị egbochi, n'ihi ya, ọ nwere ike ịrụ ọrụ na ala na-agba, ezigbo nnyefe ma belata oriri ike. The torque nwere ike ịbụ 4000N / m.
4. Large erute ike nke okporo-erughị ịghasa ebu. The conveyance ike nke okporo-erughị ịghasa conveyors bụ 1.5 ugboro nke ot ịghasa conveyors na akụ nke otu n'obosara.
5. Long erute anya nke okporo-erughị ịghasa ebu. Onye ebu ogologo ruo 60 mita. Na dị ka mkpa nke ndị ọrụ, na ojiji nke multi-ogbo tandem echichi, na àjà ihe ọṅụṅụ anya iga nke ihe.
6. Mgbanwe ọrụ nke okporo-erughị ịghasa ebu. Anyị ụlọ ọrụ na-amalite ma na-amị a mobile ịghasa ebu enweghị aro, nke nwere ike na-arụ ọrụ flexibly. Nwere ike isite n'otutu ala ebutu ihe, na site n'elu-ebutu ihe. Iji lining osisi, na igwe nwere ike na-arụ ọrụ n'okpuru elu okpomọkụ. Kọmpat Ọdịdị, ohere na - azọpụta, mara mma anya, mfe ọrụ, echekwa na inogide.
Post oge: Aug-15-2018